China yakananga Engagement Shaft Inotungamirwa Centrifugal Fan neLagre Mhepo Inoyerera fekitori uye vagadziri | Lvran
CQC yekuchengetedza magetsi chigadzirwa chigadzirwa
Muedzo we fan unowirirana neiyo GB19761-2009 yenyika standard. Iyo fan fan inogona kumhanya ichienderera kwemaawa makumi maviri nemana pasina kukuvara, ine hupenyu hwakareba hwebasa, ine simba-yekuchengetedza uye inoshanda, uye iyo unit rese inoiswa pasi pecomputer kushushikana uye kuomesa kuongororwa kuongorora simba rechimiro.
Nyore kugadzirisa basa
Iko kushandiswa kweoiri yekugezesa yakakomberedzwa tangi yemafuta inodzivirira mabheyaringi uye shaft musimboti kubva kune inoparadza gasi, inowedzera hupenyu hwebasa, inoderedza kuwanda kwekutadza, modular kugadzirwa, yunifomu maratidziro, zvikamu zvakakwana uye zvigadzirwa, uye inogona kushandiswa mukukurumidza uye kushoma Mutengo, kuiswa kwakazara uye kugadzirisa.
Ipa timu yebasa
Ipa kukambani kuyera mashandiro, vibration, uye nekupa bvunzo mishumo kudzivirira kutadza zvisati zvaitika, uye kuona kuti fan inomhanya pasi pemamiriro akanakisa. Inogona kugadzirirwa kune yakasarudzika yemutengi yakatarwa kuti ive nechokwadi chekuti fan inomhanya panzvimbo yepamusoro yekubudirira.
Zvakanakira:kukwirira kwekutapurirana, kuchengetedzeka uye kuvimbika, uye kukwirira kwakaringana zvinodiwa pakuisirwa uye kugadzirisa. Mazuva ano, mafeni mazhinji anonyanya kufambiswa nekubatanidza.
Kukanganisa:Chengetedza zvakanyanya kuomarara kwayo kudzivirira matambudziko. Kufambidzana kwehukama uye kusaenzana kwe Rotor matambudziko akajairika mukubatanidza kutapurirana.
Pashure: Ngura, kuputika uye kumira kweutsi Utsi Exhaust Blower Fan
Zvadaro: Maindasitiri Emhepo Kuburitsa Shaft-coupling centrifugal fan
Kudzokera Kunze Kunze Kuneta Fani
Belt Dhiraivha Type Centrifugal Fan
Centrifugal Blower Fani
Yakakwira Pressure Centrifugal Fan
Maindasitiri Centrifugal Fan
Ngura, kuputika uye kunofambira mberi kuramba Smok ...
Lvyijing fan inoshandisa yekucheka-kumucheto dhizaini dhizaini, inoshandisa PROE, CAD anobatsira masisitimu dhizaini, uye inoshandisa mabhenji epasirese ane mukurumbira, girazi faibha uye zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira kuti zviitwe nemashandiro chaiwo, kushanda kwakatsiga, mhando yepamusoro uye kutaridzika kwakanaka. Lvyijing yachinja echinyakare svikiro uye pasi kumanikidzwa FRP dzinoshandisa nzira yokubudisa mativi muromo muromo kumativi muromo, izvo kunoderedza mhirizhonga uye ruzha feni nzira yokubudisa uye kunonatsiridza ndima ...
Imwe Inlet Centrifugal Fan, Pedza Fani, Fume Kukwesha, Radial Nereza Centrifugal Fan, Yakakwira Pressure Centrifugal Fan, Centrifugal mutsinga dzinofamba nemukaka Fan,